Dad ka yimid ITOOBIYA oo buuq ka abuuraty shirka Galmudug & arrin la isku hayo | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Dad ka yimid ITOOBIYA oo buuq ka abuuraty shirka Galmudug & arrin...
Dad ka yimid ITOOBIYA oo buuq ka abuuraty shirka Galmudug & arrin la isku hayo
Qaar ka mid ah beelaha degga Galmudug ayaa waxaa la sheegay in lagu gacan bidixiyeeyay shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha Galmudug, ee ka soconaya Magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud.
Guddoonka Shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha Galmudug ayaa shalay u yeeray qaar ka mid ah beelaha, si loo xaliyo cabasho la sheegay in ay qabaan. Beelahan loo yeeray ayaa kala ahaa Saleebaan, Waceysle, Shiikhaal iyo Beesha Shanaad.
Madashii la doonayay in lagu xaliyo beelahan ayuu buuq ka dhashay, ka dib markii ay madasha soo fariisteen xubno la sheegay in ay ka yimaadeen Deegaanada Soomaalida Itoobiya, kuwaa oo ku andacoonaya qaar ka mid ah Beesha Shanaad inaanay degin Galmudug.
Ugaas Xaashi Ugaas Jimcaale oo ka mid ahaa saxiixe-yaasha Galmudugtii 2015 lagu soo dhisay Magaalada Cadaado ayaa beeniyay warka ka soo yeeray kooxda la sheegay in ay ka timid Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
“Nimankan ka yimid Kilinka Shanaad ee Itoobiya waxay doodoodu tahay in beelo ay ka mid tahay Beesha Guuleed Cadde/Beesha Shanaad aanay degin Galmudug. War adeer warkaasi war soconayo maaha, war jirana maaha. Beesha Guuleed Cadde iyo beelaha kalaba waxay ka mid yihiin beelaha degga Galmudug.” Ayuu yiri Ugaas Xaashi Ugaas Jimcaale.
Ugaas Xaashi Ugaas Jimcaale oo la hadlayay Warbaahinta gudaha ayaa yiri “Guuleed Cadde waxay deggaan Galgaduud, Kulbeer waxay deggaan Mudug, Tumaalo iyo Carab Saalax intaba waxay ka mid yihiin beelaha degga Galmudug.”
Ugaas Xaashi Ugaas Jimcaale ayaa Guddoonka Shirweynaha Dhuusamareeb ugu baaqay in ay wax ka qabtaan gacan bidixeenta uu sheegay in lagu hayo qaar ka mid ah beelaha degga Galmudug.
Waxa uu intaa ku daray haddii aan arrintan wax laga qaban ay waxba kama jiraan noqon doonto waxa ka soo baxa shirweynaha dib u heshiisiinta ee beelaha Galmudug uga soconaya Xarunta Maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb.
Cabashadan ayaa waxay ku soo aadaysaa, xilli Dowladda Somaliya ay juhdi ku bixineyso, sidii ay dib u heshiisiin u dhex dhigi laheyd beelaha ballaaran ee deegaanka ku ah Galmudug.
Previous articleSawirro:Odayaasha Bakool oo Kheyre kala hadlay arimo halis ku ah noloshooda iyo Kheyre oo amar siiyay gudoomiyaasha…
Next articleTirada xarumaha gaarka ah iyo kuwa DF ee Al-Shabaab ay joojiyeen dhismayaashooda?
Isku day la doonayo in lagu hakiyo Shirka Beesha Muddulood ee Muqdisho
DAAWO:Gud Cumar Filish oo kashifay halista Forex oo Soomaalida Ogeyn kana shaaciyay xogo qarsoonaa
Kuxigeenka Qoor qoor Oo Isbuuc Gudihiis La yimid Waxyaabo Laga Fileyn [SAWIRRO]
Somaliland oo Sii Deysay 2-Haween Oo U Dhashay Kanada Oo Ku Xirnaa Magaalada Hargeysa
Xasan Sheekh iyo Shariif oo qoraallo kasoo saaray weerarkii xalay ee Muqdisho
Shaqsiyaad Caan ah oo isku soo taagay Xilkii uu Ka Geeriyoday C/raxmaan Xoosh (AKHRISO MAGACYADA)
Warbaahinta itoobiya oo faafisay Fadeexadii Jen,Gabre ka raacday Siyaasada Somalia..
Ciidamada DANAB oo Lawareegay Amniga Garoonka Dhuusamareeb Iyo Cabsi Xoogan oo Laga Qabo
Jilaaga caanka Sanjay Dutt: Wasiirka waa saaxiibkey laakiin arrinta uu iga sheegay waxba kama jiraan
Dowlad reer galbeed ah oo shaacisay iney qaadaneyso hal milyan oo Qaxooti ah
Taliyaha Booliska Puntland oo ka hadlay iska horimaadkii Garoowe & Digniin loo jeediyay Gudoomiye Dhoobo
Daawo:Darawal gaari oo lasoo baxay nooc cusub oo khiyaano ah oo aan hore udhicin….
Madaxweyne Erdogan oo ku wajahan Dalka Jarmalka..